Sintomy ny sary mivoaka amin'ny Huawei P20 | Androidsis
Raha miresaka manokana ireo fitaovantsika finday, amin'ny Internet dia afaka mahita pejy web marobe isika Manolotra an-tsary ny lohahevitra misy azy ireo izahay. Ity safidy ity dia mety indrindra amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa manana tsiro manokana, na fiara io, na andian-tsary, sarimihetsika, tantara an-tsary ...
Fa ho an'ireo mpampiasa rehetra izay ovay vetivety ny rindrina amin'ny finday avo lenta finday dia manana safidy hafa izahay. Isaky ny mamoaka fantsona vaovao eny an-tsena ny mpanamboatra, ao anatin'ny andro vitsivitsy, dia manomboka mihodinkodina eo an-tsena ireo sary mihetsika ampiasain'izy ireo, fotoana iray mahafinaritra hanavaozana ny sarin'ny fitaovana misy antsika.
Ny terminal farany natolotra, raha ny resaka valiny dia tiako holazaina dia ny Huawei P20 vaovao, terminal izay efa nampahafantarinay anao momba ny Androidsis. Ireo terminal vaovao ireo dia tonga amina kinova telo: P20 Lite, P20 ary P20 Pro Izy ireo dia manana andiana sary miavaka manokana amin'ireo maodely ireo. Toy ny mahazatra dia efa nanomboka naka azy ireo ny vondrom-piarahamonina ary nanao azy ireo ho an'ny besinimaro mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra mametraka azy io amin'ny fitaovany, na inona na inona modely ananany.
Ny sary rehetra dia misy amin'ny famaha FullHD + sy ny endrika 18: 9, arakaraka ny fepetra voalaza ao amin'ireo fantsona telo. Ity fonosana sary ity dia ahitana sary / sary 12, sary / sary amin'ny karazany rehetra izay ahitantsika sary misy loko tsy mitongilana, izay mifanohitra amin'izay nahazatra ny mpanamboatra azy. Amin'ity famoriam-bola ity dia afaka mahita ny sarin'ny tontolo, antsipiriany, voninkazo, rano indray mitete ary koa ny alina sy ny bokeh vokany.
Atorinay anao rehetra eto ireo sary vaovaon'ny Huawei P20. Raha te-hisintona azy amin'ny famahana azy dia mila tsindrio fotsiny ilay sary izay tianao indrindra ary eo amin'ny ankavanana ambany, kitiho ny Download original image.
Te hanana bebe kokoa ve ianao sary miloko misy loko? Ampidiro ny rohy izay navelanay fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Sintomy ny sary mivoaka amin'ny Huawei P20
Ny zava-drehetra manomboka amin'ny terminal mankany amin'ny WallPaper dia iPhone tanteraka, ary tsy tiako mihitsy izany.
Harry Potter: Hogwarts Mystery tonga amin'ny iOS sy Android amin'ny 25 aprily